Guddoomiyihii degaanka Garasbaalay oo la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyihii degaanka Garasbaalay oo la dilay
Guddoomiyihii degaanka Garasbaalay ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay maanta miino loo dhigay gaarigiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax ka dhacay degaanka Garasbaalay kadib salaaddi Jimco ee maanta ayaa sababay qasaaro xoogan, waxaana ku geeriyooday Guddoomihihii degaanka ee Maamulka Gobolka Banaadir AUN Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo garan ogaa Garyare.
Sida la xaqiijiyay gaariga guddoomiyaha oo ay la saarnaayeen labo ka mid ah ilaaladiisa ayaa lala eegtay miino nuuca dhulka lagu aaso ah salaadda Jimco kadib, Waxaana la geeriyooday ilaaladii la soctay.
“War kooban oo ka soo baxay maamulka Gobolka ayaa lagu yiri, “Allaha u naxariisto Axmed Cali Garyarre, wuxuu ahaa masuul dadaal badan ku soo bixiyay sidii uu ugu shaqeyn lahaa bulshada gobolka Banaadir, gaar ahaan shacabka degaanka Garasbaaley”.
Degaanka Garasbaalay ayaa dhibane u noqday miinooyinka dhulka lagu aaso ee lala bartilmaamedsado dada bulshada indha u ah, waxaana hore qarax miino lagu dilay Guddoomiye ku xigeynkii Amniga iyo siyaasadda, Cali Maxamed, iyo guddoomiyhii dhalinyarada Cabdirashiid Cali iyo Madax kale.